“Dhibta ugu weyn ee Gobaladda Waqooyi ka jirta waa Muqaadaraadka oo…
Hogamiyaha Gobaladda Waqooyi Muuse Biixi Cabdi oo maanta khudbad ka jeediyay Masjid Jaamaca weyn ee Magaalada Hargeysa waxa uu shacabka ugu baaqay in ay badiyaan alle bariga inta lagu guda jiro maalmahaan.
Muuse ayaa shaciyey in shacabka baryada alle ay ka difaaceyso dhibaatooyinka muuqda ee haatan taagan iyo kuwa kale ee soo socda, loona baahan yahay in la joogteeyo ducada iyo iska waaninta xumaanta.
“Ilaaheyn ha inaga qaado xannuunada uu ugu weyn yahay Covid-19, Roob khayr qaba oo naq iyo naxariis leh alle haku hooriyo Gobaladda Waqooyi, Ducadu waa mid had iyo jeer laga doonayo in uu qofka ku duceysto, walaalayaal waa in aynu badinaa si dhibta alle looga qaado” ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi.
Dhibaatooyinka ugu badan ee dadka heysta waxa uu ku sheegay in ay tahay aaminaad darrada, balse waxa uu ku baaqay in laga gudbo arrintaas, si is aaminaad, kalsooni iyo is jecleysiga uu u kordho.
Waxa uu soo hadal qaaday dhibaatooyinka laga dhaxlo maan-dooriyaha iyo muqaadaraadka oo qadyaan laga taagan yahay Deegaannada Maamulka Gobaladda Waqooyi, waxa uu dul istaagay qaabka lagu soo afjari karo.
“Dhibka ugu weyn ee cabashadiisu sii kordheyso waa Muqaadaraadka, si wax looga qabto waxa ay mas’uuliyad ka saaran tahay qof waliba oo leh dareen damqasho leh, Umad maandooriye lagu saliday waa dhib weyn, kuma joojin karno in ciidamada Booliiska maalin waliba soo qabtaan dhalooyin iyo dadwata, balse waxaa laga maarmin in aan wadajir wax uga qabano” ayuu sii raaciyay Hogamiye Muuse Biixi.